Izindaba - Amazwe asayine ngokusemthethweni imboni yamathuluzi i-RCEP engenise isimo esisha sezohwebo
Amazwe asayine ngokusemthethweni imboni yamathuluzi e-RCEP engenise esimweni esisha sokuhweba
NgoNovemba 15, 2020, izindaba ezinkulu zafika futhi zaba ukugxila kwamazwe emhlabeni wonke. Ngemuva kwezingxoxo zeminyaka eyisishiyagalombili, abaholi bamazwe ayi-15, kufaka phakathi iChina, iJapan neSingapore, basayina isivumelwano se-RCEP ngenkomfa yevidiyo.
Kuyaziwa ukuthi i-RCEP imvamisa ibhekisa kubuhlanganyelo bezoMnotho obuBanzi besifunda, futhi amazwe ayo angamalungu afaka i-Indonesia, iMalaysia, iPhilippines, iThailand, iSingapore, iBrunei, iCambodia, iLaos, iMyanmar, iVietnam, iChina, iJapane, iRiphabhlikhi yaseKorea, i-Australia naseNew Zealand. Lesi sivumelwano sihlanganisa ukususwa kwezithiyo zangaphakathi kwezohwebo, ukudala nokwenziwa ngcono kwendawo yokutshala imali mahhala, ukunwetshwa kokuhwebelana ngezinsizakalo, ukuvikelwa kwamalungelo empahla yobuhlakani, inqubomgomo yezokuncintisana nezinye izindawo.
Ngokwesivumelwano esiphakathi kwamazwe ayi-15 sizokwamukela indlela yamabhilidi amabili wokuthengwa kwezimpahla ezikhululekile zenze amalungiselelo, ngemuva kokuthi isivumelwano siqale ukusebenza esifundeni ngaphezu kuka-90% wokuhweba ngempahla ekugcineni kuzofinyelela kumanani entengo, futhi ikakhulu kwehle ngokushesha Izintela kuya ku-zero nentela ephansi kuya ku-zero iminyaka eyi-10, kulindeleke ukuthi yenze indawo yokuhweba yamahhala ye-RCEP ngesikhathi esifushane zonke izibopho zokuhweba ngokukhululeka kwezimpahla.
UMnyango Wezezimali uthe ukusayinwa ngempumelelo kwe-RCEP kudlala indima ebaluleke kakhulu ekuthuthukiseni ukuvuselelwa komnotho kwangemva kobhadane kanye nokukhuthaza ukuchuma kwesikhathi eside nentuthuko yawo wonke amazwe. Ukusheshiswa okuqhubekayo kwenkululeko yezohwebo kuzoletha umfutho omkhulu ekuchumeni kwesifunda nakwezomnotho. Izinzuzo ezikhethwayo zeSIVUMELWANO zizohlomulisa ngqo abathengi kanye namabhizinisi ezimboni, futhi zizodlala indima ebalulekile ekucebiseni ukukhetha emakethe yezabathengi nasekunciphiseni izindleko zokuhweba zamabhizinisi.
Ukusayinwa kwanoma yisiphi isivumelwano ekugcineni kuzobuyela ekuthuthukisweni komnotho kanye nasezinzuzweni zabantu. Embonini yezinsimbi nezinsimbi zaseChina, ukusayinwa kwe-RCEP kuzothuthukisa kakhulu “ukuphuma” “nokuletha” imboni yamathuluzi nezinsimbi zaseChina, kuvule isimo esisha sokuhweba.
Njengendlela nemishini esetshenziswa kabanzi embonini, kwezolimo, ocwaningweni lwesayensi nakweminye imikhakha yokukalwa, ukuqoqwa, ukuhlaziywa nokulawulwa, izinsimbi nemikhiqizo yamamitha zihlanganisa cishe yonke imikhakha yemisebenzi yabantu. Ngemuva kwamashumi eminyaka yentuthuko, insimbi yensimbi kanye nemboni yamathuluzi yaseChina yakhe isigaba somkhiqizo esiphelele, ngesilinganiso esithile sokukhiqiza namandla okuthuthuka kohlelo lwezimboni, ukukhula kuyashesha kakhulu, eminye imikhiqizo ihlangabezana nezidingo zemakethe yasekhaya, kepha futhi nenani elikhulu okuthunyelwa ngaphandle emakethe yaphesheya.
Kuyiqiniso ukuthi imali ekhokhwayo yase-us ifake ingcindezi ezinzuzweni zabathengisi abaningi selokhu kwaqala impi yokuhweba yango-2018, kepha ngonyaka odlule iningi labo belifuna ngenkuthalo ukwehlukanisa izimakethe zabo ukunciphisa umthelela wentela yethu.
Okwamanje, inzuzo esheshayo yokusayinwa kwe-RCEP ukwehliswa kwemali ekhokhwayo yezohwebo phakathi kwamazwe AMALUNGU ESIVUMELWANO, okwenza kube lula ngezinkampani ukuthi zitshale imali futhi zithumele izimpahla nezinsizakalo phesheya. Kumabhizinisi ahlanganyela ekuhwebelaneni ngamathuluzi namamitha, kuyasiza ukukhuphula ukuthekelisa umkhiqizo, ukukhulisa imali engenayo yebhizinisi, ukuthuthukisa ukuncintisana komkhiqizo nokwandisa imakethe yaphesheya kwezilwandle.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokwehliswa kwemali ekhokhwayo, izinsimbi kanye nemikhiqizo yamamitha kuxhaxha lwezimboni lokubambisana nokubambisana kwamazwe omhlaba futhi okungabizi kakhulu, ngasikhathi sinye, izimakethe zomhlaba nezasekhaya zingaba nokushintshana okulula kakhulu kwezimpahla ezidingekayo, ezifanele ukungenisa kwamabhizinisi asekhaya insimbi kanye nemikhiqizo yemitha ukuhlangabezana nesidingo.
Okwamanje, amazwe ayi-15 asayine i-RCEP. Ngendlela yokuzibophezela kwentela yezwe ngalinye, okokusebenza kanye nemikhiqizo yamamitha ebandakanyekayo ifaka amafomu amagagasi, abahlaziyi be-spectrum nezinye izinsimbi namadivayisi asetshenziselwa ukukala kagesi noma ukuhlolwa. Imishini yokuhlola kanye nemishini yokusebenza kobulukhuni, amandla, ukucindezela, ukuqina noma ezinye izakhiwo zomshini; Izinsimbi namathuluzi wokuhlaziya womzimba nowamakhemikhali (isb., I-chromatograph yegesi, i-chromatograph engamanzi, i-spectrometer).
Kuyabonakala ukuthi ngokuqaliswa kwemithetho efanayo yemvelaphi, izinqubo zamasiko, ukuhlolwa nokuhlukaniswa, amazinga ezobuchwepheshe kanye neminye imithetho, ukuqedwa kwezithiyo zentela nezingezona izintela kuzodedela kancane kancane umphumela wokudala we-RCEP. Njengomkhiqizi wesibili ngobukhulu wensimbi nowamamitha emhlabeni, ukuncintisana kwensimbi nemikhiqizo yamamitha aseChina kuzothuthukiswa ngokuqhubekayo, kuhlomulise amabhizinisi nabathengi abaningi.
Izintambo ezihamba nge-Wire ze-6, IServo Motor Actuator, IHybrid Stepper Motor, Kuvaliwe I-Loop Stepper Motor Driver, 220 Volt Ac Servo Motor, I-Ac Stepper Motor,